Maxkamadda ciidamada qalabka sida oo xukun dil ah ku fuliyay rag fuliyay weeraro iyo qaraxyo ka dhacay Muqdisho – Bandhiga
Maxkamadda ciidamada qalabka sida oo xukun dil ah ku fuliyay rag fuliyay weeraro iyo qaraxyo ka dhacay Muqdisho
Maxkamadda Ciidamada qalabka sida ee dowladda Soomaaliya ayaa saaka dil toogasho ah ku fulisay labo xubnood oo ka mid ahaa AL-shabaab kuwaas oo lagu soo eedeeyay weerarro kala duwan oo ay geysteen Magaalada Muqdisho.
Labada Nin oo dhowr jeer ka soo muuqday Warbaahinta dowladda ayaa lagu kala magacaabaa
Canshuur Cismaan Abuukar iyo Maxamed Cali Barroow,kuwaas oo lagu eedeeyay in ay dilal qorsheysan iyo weerarro ka geysteen Magaalada Muqdisho.
Raggaas oo warbaahinta dowladda soo bandhigtay meelaha ay sheegeen in ay weerareen waxaa ka mid ahaa Gaari lagu weeraray Isgoyska Digfeer oo lagu dilay xubno ka mid ahaa qoyska reer Dahabshiil, sidoo kale isla sanadkaas 2017 waxaa ay isgoyska Via Roma ku dileen wiil ay dhashay Guddoomiyaha Ururka Haweenka Qaranka Batuulo Axmed Gabballe iyo Haweeney ka mid ahayd Haweenka Qaranka.
Waxaa kale oo raggan weerareen Hoteellada Saxafi iyo Naasahablood 2, waxaa kale oo ay weerareen Tiyaatarka Qaranka,waxaana weerarkaas dadkii ku dhintay ka mid ahaa Wariye Cawil Daahir Salaad oo ka tirsanaa Universal TV iyo dad kale oo badan.
Maxkamadda Ciidamada qalabka sida ayaa ku xukuntay dil toogasho ah waxaana lagu fuliyay saaka oo Isniin ah.
Toogashadan ayaa ku soo aadeysa iyada oo weerar ay mas’uuliyaddiisa sheegteen AL-shabaab lagu dilay in ka badan 10 qof oo ka mid ahaa Maamulka Gobolka Banaadir oo uu ugu horreeyay Guddoomiyihii Gobolka Banaadir Injineer C/Raxmaan Cumar Cismaan Yariisow oo shalay lagu aasay Magaalada Muqdisho.
Qarax khasaaro geystay oo ka dhacay degmada Kaxda ee gobalka Banaadir
Koox hubeysan oo dil ka geysatay Muqdisho
” Balanta aan ka qaaday Hooyadey ayaan uga fadhiistay Ciyaaraha”